Ao anatin'ilay famaritana ny "fikorontanan'ny placente" amin'ny fambolena, dia mahazatra ny mahatakatra ny fametrahana voalohany ny toerana misy ny zaza eo amin'ny rindrin'ny tranonjaza. Ny fanitsakitsahana ny fizotry ny fitondrana dia misy fiantraikany ratsy eo amin'ny fivoaran'ny foetus ary matetika mitarika ho amin'ny fahafatesany. Diniho ity fanitsakitsahana ity amin'ny antsipiriany, mamariparitra ny karazany, ny antony sy ny fomba fitsaboana.
Inona avy ireo karazana fitazonana?
Rehefa dinihina fa ny fihanaky ny placenta toy ny fitondrana vohoka amin'izao fotoana izao, dia manohy ny fananganana an'ity fandikan-dalàna ity isika.
Noho izany, arakaraka ny vanim-potoanan'ny fandrosoana, dia manavaka:
fametrahana am-piandohana (1 trimès);
amin'ny faran'ny faran'ny taona (faran'ny fe-potoana faharoa sy 3);
amin'ny dingan'ny fitaterana.
Rehefa voamarina ny faritra misy ny placenta, izay voapoizina, dia manao dokotera ny dokotera:
fametrahana tanteraka (miala tanteraka amin'ny rindrin'ny tranonjaza ny toerana misy ny zaza);
partial (mety ho marginal (manasaraka fotsiny ny sisin'ny placenta) sy ny afovoan-toerana (ny fametrahana dia mipoitra eo afovoan'ny toerana misy ny zaza).
Ankoatra izany, arakaraka ny fomba fiasan'ny fizotran'ny tarika, dia afaka manavaka ny endrika tahaka azy ny:
ny fandrosoana (misy ny fitomboan'ny faritra misy ny placenta) ao anatin'ny fotoana fohy);
tsy mivoatra (rehefa mijanona ny familiana).
Noho izany, inona no mety hitranga?
Araka ny hita amin'ny fanoratana etsy ambony, ny fanitsakitsahana ny fitondrana vohoka dia mety hivoatra na mandritra ny vanim-potoan'ny lahy sy ny vavy, ary mivantana mandritra ny fotoam-bavaka. Na izany aza, tsy miankina amin'ny antony nahatonga ilay fandikana izany.
Anisan'ireo antony mahatonga ny fivoaran'ny fikorontanan'ny placenta, ilaina aloha ny manonona ireto manaraka ireto:
aretina amin'ny rafi-panafody kiriodraika (fampitomboana ny tsindrim-peo, ohatra);
fampihenana ny rafitra urine ( nefrit );
aretina amin'ny rafitra endocrine (diabetes mellitus);
ny fanatrehana ny fanehoan-kevitra miverimberina;
Famaritana momba ny trombôs;
Ny antony toy izany dia manazava ny antony mety hipoitra mandritra ny fitondrana vohoka. Raha miresaka momba ity fanitsakitsahana ity isika, izay mitranga mandritra ny fizotran'ny fahaterahana, dia toy izao no amaritana azy:
Ny tara-pahazavan'ny balsama (amin'ny famoahana tanteraka ny vozon'ny taolam-paty dia mitoetra tsy mivadika);
fisotroan-dronono amniotic voalohany, indrindra amin'ny polyhydramnios;
fanalefahana maharitra ny tranon-jaza, izay mitondra mankany amin'ny antsoina hoe hyperstimulation (miaraka amin'ny fitondran-drahibe goavambe amin'ny oxytocine);
Ny foetus dia manana tadim-poitra fohy.
Ahoana ny fihetsik'ilay familiana ary inona no ambarany?
Miankina amin'ny karazam-pahasalamana, misy 3 degre ny fihenjanan'ny fandikana tahaka izany, toy ny fanakorontanana eo amin'ny sehatra:
Light form. Ny tena mampiavaka azy dia ny hoe tsy fehezina ny fepetra ankapoben'ny vehivavy bevohoka. Misy ny fofona kely amin'ny ampahany kely amin'ny placenta, izay miaraka amin'ny famoahana ra kely avy amin'ny taratasy mivalona.
Ny diplaoma ambany dia manavaka ny fametrahana 1/3 amin'ny toerana misy ny ankizy. Amin'ny ra mandriaka ivelany, ny rà dia somary voluminous, matetika amin'ny clots. Misy fanaintainana ao an-kibo, fitomboan'ny tonon-taonany. Mivoatra ny hypoxia, izay mitaky fitsaboana ataon'ny dokotera.
Heavy degree. Misy fitombenana 50% na mihoatra amin'ny faritra misy ny placenta. Miharatsy ny toe-pahasalaman'ilay vehivavy bevohoka, misy ny ra mandriaka be loatra, maty ny foetus. Ity fepetra ity dia mitaky hiditra hopitaly maika.
Inona no mampidi-doza ny manala ny placenta ary inona no tokony hatao amin'ny fivoarany?
Amin'ny fisehoan'ny soritr'aretina voalohany (fanaintainana ao ambany kibo ambany, rà avy amin'ny taratasy mivalona, ​​fampitomboana ny tonon'ny uterine, ny tsy fisian'ny hetsika ao amin'ny gorodona), ilaina maika ny mijery dokotera.
Mba hamaritana ny halaviran'ny familiana, ny ultrasound dia tanterahana. Miankina amin'ny angon-drakitra voaray, ny dokotera dia manao drafitra ho an'ny asa fanampiny. Noho izany, miaraka amin'ny fialamboly kely, manara-maso sy manara-maso mba hahazoana antoka fa tsy mitombo ny faritra. Amin'ny fametrahana tanteraka, dia ilaina ny fandefasana aloha. Amin'ny ambaratonga voalohany, dia tsy voavonjy ny foetus.
Raha miresaka momba ny fitarainana mety hitarika isika, dia izao:
hypoxia ao amin'ny foetus;
fisavoritahana ara-pihetseham-po amin'ny vehivavy;
fahafatesana ny foetus.
Takelaky ny Placental amin'ny herinandro
Ny ramanavy mandritra ny fitondrana vohoka amin'ny daty manaraka
Herinandro 24-n'ny vehivavy bevohoka - fivoarana fetalina sy fahatsapana vaovao avy amin'ny reny
Fanolorana mandritra ny fitondrana vohoka
Ahoana no hanamaivanana ny toxemia amin'ny dingana voalohany amin'ny fitondrana vohoka?
Strepsils nandritra ny fitondrana vohoka
Azo atao ve ny manidina bevohoka?
Rayban -po: ahoana no hanavaka ny sandoka?
Kitapo plastika amin'ny loggia
I Jayden Smith dia niseho tamin'ny New York Fashion Week niaraka tamin'ny malalany
Salady miaraka amin'ny tongolo lay - resipe
Festal - famantarana ny fampiasana
Photoshoot ny mpivady
Kylie Jenner dia nandeha an-tongotra tao amin'ny "ririnina"
Ahoana ny toe-tsaina?
Kasimasy kapoaka - 25 sarin'ny modely modely amin'ny fotoana rehetra
Fanilo - Fashion 2014
Ny akanjon'ny volombava iray - ahoana no hisafidianana?
Fiarovana an'i Pucara de Kitor
Ny lamosina niboridana tamin'ny fanjaitra
Cefazolin ho an'ny ankizy